Ra'iisul Wasaare Khayre oo la Kulmay Madaxweyne Erdogan (SAWIRRO)
Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulamo gaar gaar ah kula yeeshay Magaalada New York ee dalka Marayka qaar ka mid ah madaxda caalamka ka socotay ee ka qaybgaleysa Shirka Guud ee Qaramada Midoobey.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo kulan gaar ah la qaatay Madaxweynaha dalka Turkigamudane, Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu mahadceliyay shacabka iyo Dowladda Turkiga taakulaynta aan hagarta lahayn ee ay siiyaan Soomaaliya.
Wuxuuna yiri Ra’iisul Wasaare Xasan Khayre “Soomaaliya marnaba Iloobi mayso walaalahooda Turkiga iyo sida ay ugu soo gurmadeen.” mar uu la hadlay Madaxweynaha dalka Turkiga.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka soo kabaneyso dhibaatooyinkii dalka ragaadiyay. Waxaana u tilmaamay baahida loo qabo in Amniga Soomaaliya kor loo qaado, si buuxdana loo tayeeyo hay’adaha Amniga si loo gaaro nabad wacan oo waarta.
September 23, 2017 Geesey